Kedu otu Shozụ ahịa n'ịntanetị na Mbupu Omume Na-agbanwe na 2015 | Martech Zone
Anọ m na Chicago na IRCE na obi ụtọ na ihe omume ahụ. Ihe ngosi a buru ibu nke na ejighi m n’aka na m ga-emezu ihe omume a dum nyere ụbọchị di na nwunye m nọ ebe a - enwere ụfọdụ ụlọ ọrụ dị ịtụnanya anyị ga-ede banyere ha. Isi nzuzu na-elekwasị anya na nsonaazụ ndị a tụrụ site n'aka onye ọ bụla gosipụtara ebe a na-enye ume ọhụrụ. Mgbe ụfọdụ, mgbe m gara mmemme ahịa ndị ọzọ, ụfọdụ nnọkọ na itinye uche na-adị ka ọ na-adaba n'ụlọ ọrụ ga-enweta nsonaazụ ego.
Nyaahụ m gara nyocha UPS na Gian Fulgoni, Onye isi oche na ngalaba-onye guzobere comScore ebe UPS weputara ha kwa afo UPS Pulse nke Online Shopper (akwụkwọ ndị ahụ bụ njikọ dị n’elu aka nri) ọmụmụ ihe ahụ na-egosi na ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na omume ịzụ ahịa ịntanetị na-anọgide na-abụ ụkpụrụ.
Isi ihe sitere na UPS Pulse nke Online Shopper
Ppingzụ ahịa Obere na Mpaghara - Ọhụrụ na ọmụmụ afọ a, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa (93%) na-azụ ahịa na obere ndị na-ere ahịa. 61% zụrụ ahịa na ebe ndị a n'ihi na ha na-enye ngwaahịa pụrụ iche, 49% enweghị ike ịchọta ihe ha chọrọ site na ụlọ ahịa ọdịnala yana 40% chọrọ ịkwado obere azụmaahịa obodo.
Globalzụ ahịa Global - Tụkwasị na nke a, 40% nke ndị na-azụ ahịa azụrụ site na ndị na-ere ahịa na-abụghị US, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara (49%) na-akọ na ha mere ya iji chọta ọnụahịa ka mma, 35% kwuru na ha chọrọ ihe ndị na-enweghị ike ịchọta na ụlọ ahịa US.
Ike Social Media - Ọtụtụ ndị na - azụ ahịa na - ejikọ ihe omume ịzụ ahịa site na mgbasa ozi mmekọrịta na 43% ịkọ akụkọ ha na - achọpụta ngwaahịa ọhụụ na saịtị mgbasa ozi. Facebook bu uzo kachasi nwee ike ma ndi ahia na-anabata ebe ndi ozo dika Pinterest.
Ahịa Dijitalụ - Mgbasa ahịa na-aga n’ihu na-agbanwe dịka ụfọdụ ndị na-azụ ahịa n’ịntanetị na-atụle iji teknụzụ mkpanaka na-echekwa: 33% chọtara akara ngosi elektrọnik na-adọrọ mmasị, 29% kwuru na ha ga-atụle ọpụpụ mkpanaka, na 27% kwuru na ha mepere iji iji mmetụ mmetụ enweta ozi, zụta ma ọ bụ hazie nnyefe.
Free Shipping - Mbupu n'efu na-anọgide bụrụ nhọrọ kachasị mkpa n'oge ndenye ọpụpụ dịka 77% nke ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị. Ihe kariri ọkara (60%) atụkwasịla ihe na ụgbọ ha iji tozuo maka mbupu n'efu. Ọmụmụ ihe ahụ na-enye nghọta iji nyere ndị na-ere ahịa aka ịbawanye ahịa - 48% nke ndị na-azụ ahịa na ntanetị kwuru na ha na-ebufe ihe na ụlọ ahịa ahụ, yana 45% nke ndị na-ekwu na ha mere ihe ọzọ mgbe ha na-eburu iwu ha.
Nghaghachi na-akwụghị ụgwọ - Dị ka akụkọ ahụ si kwuo, naanị 62% nke ndị na-azụ ahịa nwere afọ ojuju na usoro nlọghachi n'ịntanetị: 67% nyochaa iwu nloghachi nke onye na-ere ahịa tupu ịzụrụ ihe, 66% chọrọ mbugharị nnwere onwe n'efu, 58% chọrọ nsogbu enweghị "enweghị ajụjụ a jụrụ" nloghachi iwu, na 47% chọrọ akara nloghachi dị mfe iji bipụta.
Nsụgharị ndị ọzọ - E jiri ya tụnyere ọmụmụ afọ gara aga, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa mepere emepe nhọrọ nnyefe ọzọ. Na 2014, 26% kwuru na ha na-ahọrọ ịnwe nchịkọta iji nyefee ebe ndị ọzọ karịa ụlọ ha, afọ a ọ ruru 33%. UPS na-anwale nnwale mkpuchi ọrụ onwe onye na obodo ụfọdụ ugbu a.
Nnukwu Storelọ Ahịa - Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara (48%) nke ndị na-azụ ahịa na ịntanetị ejirila ụgbọ mmiri echekwa na afọ gara aga, na 45% nke ndị na-azụ ahịa ahụ zụtara ihe ọzọ mgbe ha na-azụta ntanetị n'ịntanetị.
Otu isiokwu nke mkparịta ụka nke masịrị m: ndị na-azụ ahịa gbanwee usoro ịzụ ahịa dị n'etiti ekwentị na desktọọpụ. Mgbanwe mgbanwe ọnụego ka na-adịkarị desktọọpụ. Atụmatụ bụ ngagharị ntụgharị ọnụego nke 0.5% gaa na desktọọpụ 3% nkezi ntụgharị ntụgharị. Nke ahụ apụtaghị na onye na-azụ ahịa bụ anaghị atụgharị… Ha na-agbanwekarị n'etiti ha abụọ. N'ezie, Maazị Fulgoni kwuru na nnukwu igwe elele nke ekwentị ọhụrụ dịka iPhone 6+ nwere ike ịbụ maka kpatara ntakịrị mmụba na mmefu ego mkpanaka na ngbanwe ntụgharị.
Ndị na-ere ahịa kwesịrị ịnọgide na-aga n'ihu na ngwa ngwa mkpanaka ha, dịka 38% ndị nwere ngwaọrụ mkpanaka mana ha anaghị eji ya mee ihe ịzụrụ na ihe onyonyo ngwaahịa ahụ ezughị oke ma ọ bụ doo anya, 30% kwuru na ọ siri ike iji ngwaahịa tụnyere.
2015 UPS Pulse nke Online Shopper ọcha akwụkwọ - Domestic
2015 UPS Pulse nke Online Shopper infographic - N’ụlọ
2015 UPS Pulse nke Online Shopper onye isi ọmụmụ - esticlọ
Tags: FacebookNnyefe nnyefeịzụ ahịa n'ịntanetịPinterestmbupuelu
Onyinyechi chukwuemeka (@OnyeOkike)
Sep 14, 2015 na 8: 51 AM
Daalụ nke ukwuu maka ịkekọrịta oke ozi na ọnụ ọgụgụ a!